Murashixiinta guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa oo khudbadahooda kasoo horjeedin doona xildhibaanada aqalka sare ee DFS - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMurashixiinta guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa oo khudbadahooda kasoo horjeedin doona xildhibaanada aqalka sare ee DFS
January 21, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Murashixiinta guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa oo khudbadahooda kasoo horjeedin doona xildhibaanada aqalka sare ee DFS. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sida qorshuhu yahay, xildhibaanada aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Sabti ah dhageysan doona murashixiinta u tartamaya guddoomiyaha aqalka sare iyo ku xigeenadiisa.
Ku dhawaad 16 xubnood oo u tartamaya boosaskaas ayaa la filayaa in ay maanta khudbadahooda kasoo horjeediyaan kulan ay xildhibaanada aqalka sare ku yeelan doonaan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Labo xubnood ayaa u tartamaya guddoomiyaha aqalka sare halka 14 kale ay ku loolamayaan ku xigeenka kowaad iyo kan labaad.
Doorashada ayaa beri oo Axad la filayaa in ay ka dhacdo magaalada Muqdisho.
Xildhibaanda aqalka sare ee Soomaaliya oo ka kooban 54 xubnood, ayaa ka qeybgali doona doorashada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya.
January 8, 2017 Doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Somaliland kasoo jeeda oo Muqdisho ka bilaabmatay